फूर्वा कित्तार शेर्पा
पासाङ ल्हामु मेरी एक मात्र छोरी हुन् । मेरा पाँच सन्तान छन् । दुई छोरा जन्मिएपछि पासाङ जन्मिन् । त्यसपछि अरु दुई छोराहरु जन्मिए ।
पासाङ सानैदेखि अलिक कठोर र कडा स्वभावकी थिइन् । कुनै कुरा वा विषयमा सोचेपछि उनी गरी छाड्थिइन् । नारी, आइमाईले गर्न सक्छन् नि जे पनि–उनी भनिरहन्थिन् ।
जस्तै परेपनि मनले आँटेको काम गरिछा्ने उनको स्वभा थियो । कुनै कुनै काम गाह्रो छ नगर भनदा पनि उनको उत्तर हुन्थ्यो –‘मलाई केटी भनेर हेपेको ? म गर्न सक्छु नि ।’ ‘गरेरै छोड्छु’ भन्ने उनको प्रतिज्ञा हुन्थ्यो । सगरमाथा छढ्न गएको पनि उनको यही प्रतिबद्धता हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
हिमाल चढ्नलाई लाक्पा फुटी, नन्दा राई र पासाङ ल्हामु गएका हुन् । त्यो वेला नेपाली छोरीहरुले हिमाल चढ्न खोज्दा सरकारले ‘ट्याक्स’ लिएको थियो । यो सरकारी व्यवहारबाट पासाङले निकै ठूलो चित्त दुखाएकी थिइन् ।
नारीहरुले गरेको काममा सरकारले सघाउनुपर्नेमा उल्टै हिमाल चढ्दा कर लिएकोमा पासाङले झनै चम्केर यो काम गरेकी थिइन् । छोरीहरु जस्तोसुकै परिस्थितीमा पनि काम गर्न सक्छन् भन्ने उनको धारण थियो ।
हिमाल चढ्नलाई पासाङ तयार भएपछि त्यतिखेर एउटा कार्यक्रममा मदन भण्डारीसँग भेट भयो । उनले असल बाबु–आमा भएकाले ज्यादै गतिलो छोरी पासाङ जन्मेकी मलाई पटक–पटक भनेका थिए । छोरकिो सुर्ता नगर भनेर मलाई ढाडस दिएका थिए मदन मण्डारीले । तर, त्यस्तो मायालु व्यवहार देखाउने मदनको पोखारबाट चित्तवन आउँदा मृत्यु भयो ।
पासाङ र मदनको लास एकै ठाउँमा राख्नुपर्यो । दुवैलाई मैले एकै ठाउँमा राख्नु पर्यो । दुवैलाई मैले एकै ठाउँमा देखेपछि सम्हालिन निकै गाह्रो भयो ।
पासाङ र मदनको मृत्यु भएको समय कसरी एउटै जुरेको होला ? म अहिले पनि अनौठो मान्छु । यो मेरो जीवनकै विशेष सम्झना हो । अहिले पनि म पासाङको तस्वीर देख्दा मदनले बोलेका ती कुराहरु पनि सम्झना गर्छु ।
सरकाले जति गर्यो –अझै पासाङका लागि अपूरो भएको लाग्छ मलाई । म सन्तुष्ट छैन । पासाङको नामका लागि अझै गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । पासाङलाई सम्झना पर्ने अरु अरु कामहरु भईदिए जाती हुन्थ्यो ।
पासाङलाई नेपाली समाजले भने निकै सम्झना गरेको छ । उनको प्रसिद्धी देखेर ज्यादै खुशी लाग्छ । मलाई उनको आँटको सँधै तारिफ गर्न मन लाग्छ । मेरो छोरीको आँट गरेको हुनाले अहिले अरु छोरीहरुले हिमाल चढ्न आँट गरेका हुन् । यो देख्दा निकै खुशी लाग्छ । मेरी एउटी छोरीको आँटले गर्दा अरु छोरीहरुलाई आत्मबल मिलेको छ । उनको साहसले गर्दा अहिले संसारमा नेपाली नारीहरुको नाम पनि चम्केको छ ।
पासाङ जन्मिँदा म घरमै थिए । शुक्रबारको विहान उनी जन्मेकी थिइन् । जुबुतिरको भेडी गोठ त्यो बेला हाम्रो घर छेउतिर निकै आउँथे । एक जना भेडी गोठको गोठाल्नीले पासाङ जन्मिँदा मेरी श्रीमतीलाई साथी भएर सघाएकी थिइन् ।
पासाङ जन्मिदा यस अघि पनि छोरा जन्मिएकाले अब छोरी जन्मिए हुन्थ्यो भन्ने मैले मनमनै सोचेको थिएँ । सोचे जस्तै भयो –पासाङ ल्हामु जन्मिन् ।
पासाङ जन्मेपछि मैले सरसफाई गरेँ । एक जना गुरुङ्नीले नाइटो काटिकी थिइन उनको । मैले सुत्केरीको कपडा फेरेर सघाएको थिएँ । मेरी आमा छोकीले पासाङ ल्हामुको नामकारण गर्नुभएको हो । मैले कहिल्यै पनि छोराछोरी माथि हात उठाइनँ । कुनै पनि छोराछोरीलाई एक थप्पड पनि लगाइन् । अझ पासाङलाई त झन् गाली नि गरेको सम्झना छैन । म ट्रेकिङमा जान्थेँ । फर्किँदा छोराछोरी सम्झेर चकलेट ल्याउँथे ।
एकपटक पासाङलाई लिएर नाम्चे ट्रेकिङ गएको थिएँ । पेम्बा लकीले पासाङलाई देखेर ‘ओहो ! कति राम्री छोरी पाएको ?’ भनेका थिए । केही समयपछि म फेरि कामकै लागि नाम्चे पुगेको थिएँ ।
‘छोरी कसलाई दिएको ?’ पेम्बाले सोधे ।
मैले छोरीको विहे भएको कुरा गरेँ । उनले भने –‘ए तिनीहरु नी राम्रा परिवारका हुन् । तर, मैले पो पासाङलाई बुहारी बनाउने सोचाई राखेको थिएँ ।’
पासाङले यस्तै १५–१६ बर्षको छँदा बक्खु चाहियो भनेर मलाई भनेकी थिइन् । मैले पनि काठमाडौं आएको बेला खुसीले किनेको थिएँ, छोरीका लागि वक्खु । त्यो कफी रङको बक्खु थियो ।
छोरी सम्झ्यो कि मेरो छातीमा गाँठो पर्छ । धेरै कुरा त मैले विर्सिसकेँ । तर, उनका बाल्यकालका कुरा कतिपय सम्झनामा छन् ।
उनी ढुंगाहरु बटुलेर खेल्थिन् । ढुंगाको चुल्हो बनाएर आफ्नै धुनमा खेल्थिन् । छोरीले पढ्न पाइनन् । तर, भित्रैदेखि बाठी र साहसी स्वभाव तिनको थियो ।
पछि काठमाडौंको लाली गुराँसकी साहुनी लामा दोर्जीकी श्रीमतीले पासाङलाई भनिछन्– ‘तिमीले कति पढ्यौ ? तर, हामीले पढ्न पाएनौं । हामे हाटेल छ । तर तिमीले पढेर कति धेरै कुरा थाहा पायौं ।’
पासाङले नपढेपनि पढेजस्तै थिइन् । अहिले पनि उनले पढेकी भए धेरै ठूलो मान्छे हुन्थिन् जस्तो लाग्छ । दाइृहरुसँग त झगडै गर्थिन पासाङ । हक्की र निडर स्वभाव थियो तिनको ।
पासाङ खुबै नाच्ने गर्थिन् । अरु कोही नाचे भने उनलाई म सम्झिहाल्छु । मलाई छकाएर उनी नाच्न जान्थिन् । सुर्केको कान्छी पासाङकी साथी थिइन् । पासाङ ल्हामु र कान्छी प्रायः सँगसँगै नाच्ने गर्थे ।
म लुक्लामै छँदा पासाङ सगरमाथामा बितेको सुनाएको थिए । मलाई सुरु सुरुमा फर्किन्छन् की भन्ने विश्वास महिनौंसम्म नै भइरह्यो । पछि प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले एकपटक भेटमा भनेका थिए –‘तपाई बाबु–आमा असल भएकैले पासाङले ठूलो नाम कमाइन् । तपाईँकी छोरीको निधन भएपनि उनको नाम सुनको अक्षरमा लेखिएको छ ।’
यो कुरा म कहिल्यै विर्सिन्न । सन् १९९३ अप्रिल ३ मा पासाङ पुगेको खबर टिभीमा मैले छर्लङ्गै देखेको थिएँ । छोरी माथि हिमाल गएको हुनाले म घर रुङ्न बसेको थिएँ । पेम्बा दिकीले पछि भनेकी थिइन्–‘दिदि माथि नै छन् रे ! अक्सिजन लुक्लाबाट लगेपछि अलि तल भरिन् रे !”
तर उनी तल अर्कै अवस्थामा आइन् । पासाङ बितेपछि धेरै कुरा अहिले म सम्झिरहेको छु । उनी जन्मेको घर भत्काएर अर्को बनेपनि त्यो पुरानो घरको कोठा भउको ठाउँमा जाँदा म उनलाई सम्झन्छु ।
पासाङ गएको धेरै बर्ष भो । अहिले उनलाई सम्झिँदा मेरो आँखा रसाउँछन् । उनले आँटेको गरिन् । सोचेको कुरा गरिहाल्ने हुनाले उनले हिमालसँग हार खाइनन् ।
उनले देखाएको बाटोमा अहिले धेरै नेपाली नारीहरुले काम गरिहेका छन् । पासाङसँग गरिछाड्ने बानी थियो । त्यो बानीले हिमाल मात्रै चढिनन्–धेरैको लागि उदाहरण पनि बनिन् । अहिले धेरै नेपाली छोरीहरुले उनलाई अगाडी सारी हिमाल चढेको देख्दा खुशी लाग्छ ।
(पासाङ प्रतिष्ठा–२०७५ बाट साभार)
फूर्वा कित्तार शेर्पाका अन्य लेख तथा रचनाहरु